दोश्रो पोखरा प्रिमियर लिग हुने, कहिलेबाट शुरु ? -
September 24, 2019 September 24, 2019 khabar sansaarLeaveaComment on दोश्रो पोखरा प्रिमियर लिग हुने, कहिलेबाट शुरु ?
६ असोज, काठमडौं । दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकबाट शुरु हुने भएको छ । आयोजक क्विन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता कात्तिक २६ गतेबाट मंसिर ७ गतेसम्म चल्ने जानकारी दिएको हो ।
पोखरा क्रिकेट रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा पहिलो संस्करणकै ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पीपीएलमा विराटनगर टाईटन्स, चितवन राईनोज, पोखरा पल्टन, बुटवल ब्लास्टर, काठमाडौं रोयल्स र एक्स्पर्ट धनगढी ब्लुजबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
गतवर्ष भएको पहिलो संस्करणमा पारस खड्काको नेतृत्वको टोली चितवनलाई पराजित गर्दै शरद भेषावकर नेतृत्वको घरेलु टोली पोखरा पल्टनले उपाधि जितेको थियो । गत संस्करणको विजेताले २७ लाख तथा उपविजेतालाई १० लाख पाएका थिए।
टेनिसमा कमल थापाको दुबै हातमा लड्डु
September 27, 2019 September 26, 2019 khabar sansaar
June 4, 2019 June 3, 2019 khabarsansaar
नेपाल एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजनको सजिलो समूहमा
August 30, 2019 khabar sansaar